Q. 8aad. Sheekadii Taleex: “Garaaddo reero ugarnaqa goormaa udanbeysey sawtii nimanka Siyaasadda loo wada cumaamaday”. – make music movie Edition: International | Video
Published On: 2 April 2013 1:45 am Taleex Arts / Wararka | By taleeh Q. 8aad. Sheekadii Taleex: “Garaaddo reero ugarnaqa goormaa udanbeysey sawtii nimanka Siyaasadda loo wada cumaamaday”.
Daahir: Helloo, Helloo
Dalmar: Haloow Haloow war waa kuma
Daahir: Hello, … Daahir weeye ninkaani, lambarkaaga duqeeyee , Dalmar saw maad ahayn
Dalmar… Daahir waa anigiiye, waxaad duunyo dhaqaysiyo, dad waxaad ku tacbeysay dareen kheyr leh ka sheeg!
Daahir: Dalmaroow nabad weeyoo Daa’inkaa na gargaarey, baqwaaqaanu durduuran… Diraacdii baxday maantoo, cirkii waa kan da’oo, khayrka daa’in shubee, xaggee reerkii Degsiimo maanta daaqahayaa.
Dalmar:hahahaaaa! Aminkadaas aan kula hadlayo bankii Deero-Xiije halkii geedkii Dalladka miyaad ka ambanaysaa……
Daahir: Saw kii Salalmac kasii rognaa maaha
Dalmar: Haaheeeey. Ilaah Og. halkaasaan dharaar saddexaad ku kabaalqaaday.Gurigaa Qawlood baanse geeddigayagu ahaa. Riyihii iyo waxbaa nagu dhalayoo aan is idhi intay waxaruhu socodka adkaysanayaan bal laba saddex maalmood ukaadi. Abaarna maahoo gurigan laftiisa hogol baa qaboojisayoo durba Maxaansugihii iyo ramaaskii banaankay iskeeneen. Berraanse hoggaanka usoo dhufanayaa.
Daahir:Allow aadan beerka beelin, waa yahay
Dalmar: Annaga xaalkaayagu waa kaase xaggee adigu reerkii ku furtay?.
Daahir: War waa sidaase gurigaas Qawlood ee aad geediga kusoo tahiin baan anba shalay reerkii ku furay, Ilaah mahaddii barwaaqaa Alle dhigay.
Dalmar: Waan gartey, oo heedhe dhinacee ku furtay ma xaggii Conqorta, mise dhuurtii.
Daahir: Mayee goshii kusoo jeedday Xiddigaale. Dee illeyn waad garanaysaayoo haddoo kale jeexa hoos looguma degi karo inta cirku cusub yahaye.
Dalmar:Waa dhab! Beynoow jabaddadii degalweynayaasha ahaa ee dooxada qarkeeda ahaa baan kasha ku hayaaye,side loo degan yahay halkaa?
Daahir: Dalmaroow macal asaf! Halkaa Faantaa uddub dhigatayoo reddebina kama banaana, guricaskii xagaagii la deganaa uun baa ka bananaan,sabarka kalaanse jabad kaaga jeedaalinayaa soo jeermo.
Dalmar: War inaadeeroow illaahey kheyr ha ku siiyo,……
Dalmar iyo Daahir oo Doorkan ku kulmay Qudhacdii Xiddigaale oo rahu dhaadaa hayo!
Dalmar: Ilaahay waa raxmaane waa kaa dhulkii engegnaa durba asturaye.
Daahir: Maashaa Allah waa Ilaahay Mahaddii, Dalmaroow inkastoo dhulku hadduu Qoyo aan ka baqayo in dadku qoyi waayaan.
Dalmar: Oo heedhe haddii Qawlo roob helay biyona Soomareen, Dhummayina sidaasoo kale tahay oo Cali Nuur oodda dhinaca isusaaro miyaynaan ka rajo qabin waxii inagu habsaday inaynu talo ka yeelanno.
Daahir: Heedhe way fiicnaan lahayde, waxa ka horreeya horta Taladeenna ma umadax bannaanahay
Dalmar: Maxaa laynaga rabaa Daahiroow oo horta laynoogu meeraalaysanayaa
Daahir: Nimanbaa Faal inoo qabtay muddona waxan dabaday kasoo wadeen, markii hore waxaa ku adkaatay inay Cali Nuur dhexgalaan laakiin nasiib darro “Hadh iyo Hoosiis baa laynoo soo Kooreystey” oo dab ina dhexdhigay.
Dalmar: Waa maxay hadafkoodu
Daahir: Hadafkoodu waa cad yahay, Dhulbahante Puntland in laga saaro marka bannaankaa la dhigona lagula gorgortamo Soomaaliland, hadday soconweydona la yidhaahdo Tolkii Harti dib baa laysugu celinayaa laakiin Bil shuruud waa in annaga wax nalaga weydiiyaa Dhulbahante.
Dalmar: Heedhe “Hadh iyo Hoosiiskeenna” gartaye waayo waxa ku adeeganayaa ee dabada ka wadaa iyaga.
Daahir: Waa kuwo ilaa lixdankii ciil qabey oo aad mooddid in dhaxalkii aabbahood la dhacay oo marba magac la baxayey midabkoodana bedbedela.
Dalmar: Oo heedhe nimanka aad sheegaysaa ma reer Buuhoodlaa
Daahir: Buuhoodle daa, Buuhoodle daa!!!! iyagaaba godkooda biyo ugu galeenoo sideennaasoo kalaa jiif iyo joogba loo diidaye
Dalmar: Oo heedhe nimankan dadka wareeriyey ee aad sheegaysaa anigu garanmaayee haddayse Dhulbahante yihiin maa la weydiiyo waxay doonayaan oo laga kaalmeeyo.
Daahir: Heedhe wax aynaan uheli karin bay inaga doonayaan. Waxay rabaan wax ka weyn waxay goyn karaan. Aan kuusii ballaadhiyee waxay rabaan haddii kursi kasoo baxo Garoowe inay iyagu ku fadhiistaan ama fashiliyaan, hadduu kasoo baxo Somaliland inay ku fadhiistaan ama fashiliyaan, hadduu kasoo baxo kililka Shanaad ee Amxaaro inay ku fadhiistaan ama fashiliyaan, hadduu kasoo baxo Xamar inay ku fadhiistaan ama fashiliyaan, hadduu kasoo baxo Kismaayo inay ku fadhiistaan ama fashiliyaan. Waxay go’aan ku gaadheen inaan Dhulbahante degin ilaa ay salka kursi la helaan.
Dalmar: Oo beynoow waxaad ka sheekaynaysaa waa “Fitno qarsoone“Oo waxa xoolaha laynooga qaadayaa ma waxaasaa.
Daahir: Haddaaba olole cusub oo lacag ururin ah la bilaabay iyadoon tii hore ee Hudheelada iyo Diyaaraha lagu khasiray ee kursiga lagu doonayey laguna soo hungoobay aan weli laga xisaabtamine.
Dalmar: Oo beynoow ma kursaa hadda bannaan maxay ku falayaan lacagta.
Daahir: Hadda waxaa laga rajo qabaa shir la yidhi waxa lagu qabanayaa Carro Ingiriis bisha inagu soo aaddan in loo weel bannaysto.
Dalmar: Oo dadka maxaa loo sheegayaa ma shir baannu usoconaaye na kaaliya
Daahir: Maya maya maya! Waxa loo sheegayaa dagaal baa bilaabmaya degaankoo dhan lagu xoraynayo waana kama danbaystii ilaa Burcaannu gacanta kusoo dhigaynaaye daadiya lacagta.
Dalmar: Oo dadku miyaanay miyir qabin aniga Dalmaraaba og inaan Khaatumo ciidan meel ujoogaa jirine, xoogaagaa Axmad Geerashi marba meel uxawawarinayo mooyee ee uu naftiiba ka jaray, isna beryahan waxaanba maqlayey layskumaba salbannaanee. Waxa igu maqaale ah Dhulbahante markuu arkay dibindaabyaday ku wadeen reer waliba Ciidankiisii gaar buu ula baxaye. Miyaa la waayey rag daacada oo Dhulbahante ah oo waxan la khaatumaynayo ka madaxbannaan, oo khilaafaadka inta xalliyaan mideeya ciidamada reeraha oo dhan.
Daahir: Waa talo wanaagsane Dalmaroow arrintaa midaynta waxaa hortaagan oo aan fursadba u oggolayn Dhulbahante kuwii markii horeba kala furfuray , reer walbana waxay ka wataan wax ma garatadoodii iyo laba lasoo shirrabay oo la mid ah kuweenna “Hadh iyo Hoosiis”iyo dhallinyaro kuweennaa Buraashadda Axmed Garaash agtaagan oo kale ah.
Dalmar: Oo hadda ma umalaynaysaa inay qurbojoogta wax ka helayaan.
Daahir: Wax badan ka helimaayaanoo haweenkii baaba imminka ogaadayoo shalaytadaa udanbeysey Gabadh shir telefoonaadkoodii ka hadleysey oo su’aal weydiisey nin Garaada oo yidhi waxa isoo wakiishay ninka imminka ay ulabaxeen “Garaadka Guuuuud” ee Ina Cali Garaad waad yaabeysey waxa gabadhaa afkeeda ka baxaya. Waxay tidhi “wax nagu hadhay ma jiraane dalna xoraynmaasaane ilaahay ka yaaboo dibindaabyada naga daaya haddaad dal xoraynaysaan waad raamaysan lahaydeenoo duurka ugelilahaydeene, maalin walba shir telefoon nin ku jira oo lacag uun raadinayaa marka uu helona qayilayaa waqtiba ma’isagaa uhaya uu dhul kuxoreeyo”.
Dalmar: Oo Bahararsame ma garaad kalay yeelatay, waa maxay Garaadka Guud.
Daahir: Hahahahahahaaaaaaaaaa. Mayee waxa la leeyahay Dhulbahantoo dhan buu garaad uyahay Garaad Jaamaca Bahararsame
Dalmar: Oo maxay wiilka uhafrayaan isba waa ogyahaye wuxuu aabbihii ka dhaxlaye.
Daahir: Waa darajo cusub oo beryahanba iclaamka lagu faafinayey.
Dalmar: Oo heedhe shirka la leeyahay Garaaddaa Saaxdheer jooga maxaa jira ma reeraa la kala saari kari waayeyey oo loo Garaaddo badsaday.
Daahir: Garaaddo reero ugarnaqa goormaa udanbeysey sawtii nimanka Siyaasadda loo wada cumaamaday.Shirka Saaxdheer waxa looga danleeyahay in lagu soo dejiyo ajandaha shirka Taleex iyo oo saddex bilood u xannibnaa Ajendihii oo maqnaa iyo welia “Go’aanka la rab inuu Taleex kasoo baxaba!”
Arrinkalena shirka waa laga leeyahayoo beladii Axmed Garaash baa ku madax adkaadayoo waxa la rabaa in inta dad meel lagu ururiyo la yidhaahdo waa ciidamo xaqudir ah oo Khaatumo sawirna laga qaado dabadeedna dadka lacag lagaga qalin shubateeyo.
Dalmar: Oo sawtii la lahaa gurigaa Saaxdheer, iyo Kalabaydh ilaa gurigaa Widhwidh iyo Yagoori inta ka dhexleh ciidammo Soomaaliland baa jooga .
Daahir: Kuwa Saaxdheer iyo Kalabaydh markii ladoonaa Shaadhka laga beddelaa. Maalinta Xaabsade iyo Baashe yimaaddaan waa Somaliland, maalinta Ina Bisinle utagona waa Puntland, maalinta qolada Khaatumo utagtona waa Khaatumo, oo Maalin waa ciidanka Etoopia.
Dalmar: Wallee waa yaab iyo amakaag. Oo beynoow ma ciidankii maalintii Axmed Garaash tegey Kalabaydh lahaa waxaannu nahay Khaatumo maantii xigtayna markii Somaliland meesha soogashay Axmed Garaash baacsadaybaa iyagoo Somaliland ah! Daahir: War iska aammus, waa tabtaas, ma xusuusataa ciidankii Khaatumo ee qoladeenna la khalday ay ka qayb galeen ee Baabuurka laynagaga qabsan jirey
Dalmar: Heedhe makii Gacandar ee Ina Afnugaal lagu dili jirey
Daahir: Nacam. Yaad ku ogeyd baabuurkeennii inay maalintaa furteen!
Dalmar: Yaad ku ogeyd waa maxay. Niman Kalabaydh ah bay ahaayeen welina iyaguu ku maqanyahay.
Daahir: Nimankii baabuurkeennu ku maqnaa ina Afnugaalna gacantooda ku baxay maanta waa ciidanka Khaatumo ee Saaxdheer jooga ee Dhulbahante lacagta la rabo in lagaga urursado berrina magacay doonaan bay labixi karaan. Hadba sida reerku ugarto!
Dalmar: War bal iska aammu yaab annagaa aragnaye. Teeda kale maxay Taleex ajandaha shirkaad sheegaysey ugu samaynwaayeen.
Daahir: Dalmaroow shirku ma ansaxayo ilaa Ajandaha Saaxdheer lagusoo dejiyo.OO waxa wax ka khaldameen Axmed Garaash ayaa markii hore shirka iclaamiyey isagoon Saaxdheer soo marin. Arrimahani waa arrimo indhoweydba socdayoo Shirkii Dandan ee Jaamac Siyaadba ma ansixin ilaa Garaaddo Saaxdheer ka yimid Ajandighiisa keeneen.
Dalmar: Oo heedhe yaa geedkii loogu tegayaa haddayba nimankii Garaaddada ahaa sidan doorteen.
Daahir: War baadan hayne saw anigan kuu sheegaya in Garaadnimadii raaskoodu qaar ku filaan weyday oo loogu ladhayo “Guud” maaha halkaasaa wax marayaane.
Dalmar: Wallee sebenkan waxaad maqashaaba wixii kale ka daran. Bal war kala dhammaysan maynee waa inoo berrito ooddaan xerada ku hagaajinayaaye in yar baa ii dhimane.
Daahir: Haye haye waa inoo berrito haddii alle idmo.
Lasoco Qaybta Sagaalaad.
Displaying 8 Comments Have Your Say abdirahman says:	April 13, 2013 at 1:49 pm	kkkkkkk war dad cadhaysan baa tihiine dadka aydaan gaadhayn waxba hakashegina
hasan says:	April 13, 2013 at 1:46 pm	kkkkkkk war rag cadhaysan baad tihiine dad aydaan gaadhayn waxba ha kashegina
hasan says:	April 13, 2013 at 1:45 pm	kkkkkkk war rag cadhaysan baad tihiine idihiina iska dhaqda
saalims says:	April 4, 2013 at 10:16 pm	kkkkkkkkkkkk sheeko cajiib ah ,wale qoraaga waa mid ogaaday dabinka qarsoon ee dhulbahante loo dhigayo,,
AbdiYare says:	April 3, 2013 at 5:51 pm	Dalmar iyo Daahir waa niman si fiican ufahmay Fidmada Qarsoon ee Dhulbahante. Waxaan ka helay siday usharraxeen Ciidamada Saaxdheer ee sida aadka ah loogu tababaray inay Shaadhka beddeshaan.
mahomed says:	April 2, 2013 at 7:07 pm	maansha allah nic arts walaahi waa web hormaaraye waxaa ka diman uun laamo uu calamka ku lahaado sida webka http://www.xaysimo.com oo kale
Cilmi says:	April 2, 2013 at 8:50 am	Kkkkkkkk hadhka garanaye hoosiisku waa kuma
Qodob says:	April 2, 2013 at 7:33 am	Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Walaahay waa yaab iyo qisas cajiiba
Waxaan ku qoslay waxay rabaan waxayan